Corps de la Paix: Mpilatsaka an-tsitrapo vaovao miisa 40 nanao fihanianana
jeudi, 22 novembre 2018 15:03
Mpilatsaka an-tsitrapo miisa efapolo mianadahy avy ao amin’ny Corps de la Paix no nampanaovin’ny Mpiandraiki-draharahan’ny Masoivoho amerikana, Atoa Stuart R. Wilson, fianianana tao amin’ny Restaurant Infinithé Ivandry ny Alarobia 21 Novambra 2018.
Hiasa eo amin’ny sehatry ny fampianarana sy ny fampiroboroboana ny teny anglisy ireo mpilatsaka antsitrapo ireo rehefa avy nahavita fiofanana nandritra ny iraika ambinifolo herinandro. Taorinan’ny fiofanana momba ny teny malagasy, fianarana ny fomba amam-panao sy ny kolontsaina Malagasy ary ireo teknikam-pampianarana samihafa dia handeha hamita iraka any amin’ireo tanàna manerana ny Madagasikara izay voatendry hipetrahany sy hiasany mandritra ny roa taona ireo mpilatsaka antsitrapo ireo.
Ireo mpilatsaka an-tsitrapo eo amin’ny sehatry ny fanabeazana sy ny fampiroboroboroboana ny teny anglisy dia hanampy ireo mpianatra sy mpampianatra tsy afaka hanana fitaovana ari-fomba eo amin’ny fianarana sy fampianarana teny anglisy. Hampianatra any amin’ireo sekolim-panjakana izy ireo mba hampivoatra ny teny anglisy ho lasa fitaovana mahomby eo amin’ny fampandrosoana, indrindra ho an’ny mpianatra sy mpampianatra amin’ny CEG sy Lycée ary oniversite sasantsasany.
Araka ny maha-mpampianatra teny anglisy azy ireo dia handray anjara ihany koa izy amin’ny fanatsarana ny fahaizan’ny mpampianatra mampiasa ny teny anglisy, hifampizara traikefa sy ny fomba fampianarana samihafa ary hiezaka hampitombo sy hanatsara ireo fitaovana enti-mampianatra. Fanampin’izany dia hanampy ny mpampianatra amin’ny fanamafisana ny fahaizamanao eo amin’ny lafiny fampianarana koa izy ireo amin’ny alalan’ny fiaraha-mientana aminy.
Hanampy ny mpiaramiasa rehetra ao an-tsekoly ihany koa izy amin’ny alalan’ny fampianarana teny Anglisy ho an’ny olon-dehibe na amin’ny alalan’ny fikarakarana fandaharana fampianarana teny anglisy amin’ny radio ao an-toerana, na koa hanangana vondrona sy hetsika isan-karazany ivelan’ny fandaharam-pianarana ho an’ny mpianatra.
Manarak’izany dia hanentana sy hanabe ireo mpiara-monina ihany koa izy amin’ny alalan’ny karazana hetsika toy ny fikarakarana “voyage d’études”, fanofanana mpampianatra, na koa ireo sehatr’asa fanampiny toy ny fanentanana hiady amin‘ireo olana misy amin’ny lafiny fahasalamana na ny sehatr’asa momba ny miralenta, indrindra ny fikarakarana ny lasy fiofanana ho an’ny Mpitarika natokana ho an’ny zazavavy.
Ny Ministeran’ny Fanabeazam-pirenena dia manohana hatrany ny programa sy ny fandaharanasa fampianarana sy fampiroboroboana ny teny anglisy ao amin’ny Corps de la Paix, ary manome lanja tokoa ny fampianarana ny teny anglisy ho anisan’ny fitaovana hampitomboana ny fahaizamanaon’ireo mpiasa hiasa eo amin’ny sehatra iraisam-pirenena, eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, ny fitsaboana, ny teknolojia, ary ny fizahantany.